Hogaamiyaha mucaaradka dalka Zimbabwe oo geeriyooday – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaHogaamiyaha mucaaradka dalka Zimbabwe oo geeriyooday
Hiiraan Xog, Feb 15, 2018:- Hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka waddanka Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, ayaa ku geeriyooday waddanka Koonfur Afrika, sarkaal sare oo ka tirsan xisbigiisa MDC ayaa sidaasi sheegay.
Mr Tsvangirai oo 65 sanno ku geeriyooday ayaa waxa uu horay Ra’iisul Wasaare uga soo noqday waddanka Zimbabwe, waxaana lagu soo warramayaa inuu la xanuunsanayay Kansarka mindhiciraha ku dhaca.
“Caawa fiidkii ayuu dhintay. Qoyska ayaa sidaasi ii sheegay,” waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay gudoomiye ku xigeenka xisbiga MDC Elias Mudzuri.
Mr Tsvangirai ayaa xirfaddiisa waxaa lagu xasuustaa inuu ku soo qaatay halgan dheer oo siyaasadeed oo uu kaga soo horjeeday Madaxweyne Robert Mugabe.
Dhowr jeer ayaa la garaacay xabsigana la dhigay.
Geerida Mr Tsvangirai ayaa waxaa ku dhawaaqay Mr Mudzuri kaas oo barta Twitterka soo dhigay in xisbiga MDC “uu waayay halyey iyo nin u soo dagaallamay dimuqraadiyadda.”
Mr Tsvangirai ayaa 2000 waxa uu aasaasay xisbiga MDC, isagoo si joogta ah ula loolamay Mr Mugabe intii uu hayay xilka madaxweynaha ee waddankaasi.